Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Asa peta-toko !
INTY SY NDAY: Asa peta-toko !
Nisy lahatsoratra navoakay teto ny alatsinainy teo, milaza fa « tena tsy manara-penitra ny asa fanamboaran-dalana atao eto andrenivohitra amin’izao fotoana ». Momba ny fitaovana entin’izy ireo miasa no nambaranay fa amin’ny alina no manao ny asa ireo orin’asa nanankinana ny raharaha, nefa na ny jiro fanazavana ny asa ataony aza, tsy misy. Ny an’ny sasany misy fa mitsilopilopy. Ny an’ny hafa, ny jiron’ny fiarakodiany no manazava ny asa. Ny toerana anaovana ny asa, tsy misy famantarana mialoha mba fampitandremana ny mpampiasa lalana, fa efa eo antomotra ny toerana vao misy olona mijoro, tsy hita tsara satria maizina ny alina, mamily lalana ny fiara fa misy mpanamboatra lalana.
Tsy mahagaga raha peta-toko ny asa vita ka vao nirotsahan‘ny orana ny alahady sy alatsinainy dia vao mainka ratsy potika ilay lalana. Ohatra azo tsapain-tanana amin’izany ny etsy Andrefan’Ambohijanahary. Samia mandalo eny ange dia hahita maso an’izany e ! Toraka izany koa ny etsy Ankorondrano. Vao herinandro mahery izay no nanaovana azy io, dia io notrongisina omaly maraina io ka hatao simenitra (béton) mihitsy. Volam-panjakana ange no lany tamin’ireny nefa orin’asa tsy matihanina akory no nomena ny asa e !
Tokony homena tosika ny orin’asa malagasy. Ekena sy iombonan-kevitra izany. Saingy tokony hanaporofo kosa ireny mpandraharaha ireny fa na tsy tena harifomba aza ny fitaovana eo aminy dia tsy mena-mitaha amin’ny vitan’ny sasany ny fahombiazany. Manjary lazain’ny mpitazana ho tetik’asa nitsikombakombana tamin’ny namana sy ny mpiray fiaviana na mpiray antoko amin’ny mpitondra fotsiny misy. Tsy vitsy tokoa aloha no nanasokajy ho nifotoran’ny kolikoly ny fanomezana ny asa fanarenana sy fikojakojana ny lalana nataon’ny ministeran’ny Asa vaventy tato ho ato e !
Ny irariana dia ny tsy hiverenan’ny toa izay intsony fa tena hihombo hatrany ny fahavoazantsika raha ny hatao rehetra dia ho asa peta-toko tahaka izany hatrany nefa ny vahoaka no volosana isan’andro amin’ny hetra.